Sanduuqa Hadiyada ee ku wareegsan Baaburka | Black Périgord gawaadhida waaweyn ee sanduuqa loogu talagalay VIP - VIP truffles.
SANDUUQ HADIYAD KU SAABSAN QALBIGA
SALIIDDA KHUDBADDA SOOBTA
Soo ogow cuntooyinkayaga macaan
Sanduuqyada ku wareegsan dhagxaanta madow
Hadiyadaha ku wareegsan shucaaca madow, fikrad hadiyad ah oo aad hoos ugu dhigayso dhadhankaaga dhadhankaaga iyo kuwa kuwa aad jeceshahay.
DAMNUUL KU QANACSAN
Waxyaabaha Farsamada Gacanta ee Dammaanadda leh, soosaarka Faransiiska, oo soo-saar yar oo VIP-du aad u tiro yar
Tuber melanosporum, truffle madow ama madow Périgord truffle
Waxyaabaheena muhiimka ah
Saliid saytuun ah oo dabiici ah oo leh dhalo madow
Fiidkii u dhexeeya VIP-da
Subagga truffle madow
Sanduuqa hadiyadda ee loogu talagalay VIP-da oo laga sameeyay gawaarida madow.
Sanduuqa hadiyadeed ee loo yaqaan 'VIP truffleffle' waa sanduuqa lagu ogaanayo alaabooyinka truffle-ka ee argagaxkeena
Waxaad dooneysaa inaad ogaato, si aad u ogaatid fursadaha cunnada ee ay bixiyaan maaddooyinka wanaagsan ee ku saleysan qashinka ka imanaya gobolladayada, maaddooyinka ay ku amaanan yihiin kuugga ugu weyn, adduunka oo idil. Marka, Trufffes-VIP wuxuu kuu abuuray adiga gaar ahaan, Sanduuqa hadiyadda ee daahfurka alaabada gawaarida xamuulka ah.
Sanduuqa hadiyadda ee taraafikada madow waxaa ku jira:
gawaarida 'truffle pâté' oo ah 110 garaam (3% dhadhan madow) oo ixtiraamaya habka dhaqameed ee loogu talagalay dhulalka dhabta ah: doofaarka, beerka doofaarka, ukunta, caanaha, milix, basbaas (wax yar oo ka mid ah dhirta Provence). Laakiin dhul-gariirkan macaan wuxuu leeyahay hal maaddo oo dheeri ah, taas oo ka dhigaysa waddan aan caadi ahayn, dhul ballaaran oo deeqsinimo leh: madow madow (oo ah 3%).
20 garaam oo ah cusbo Guérande oo leh borotiinka (3%), guurka laba maado oo tayo ahaan aan sinnayn si kor loogu qaado saxan kasta,
Dhalo saliid saytuun dabiici ah oo udgoon dabiici ah ee dhalo madow (dhalada 50ml), qarax dhadhan
Keydso sheygan goor dambe
Black Périgord truffles (tuber melanosporum) waa alaabooyin leh dhadhan aan caadi ahayn. Muddadu way ku gaaban tahay qashinka cusub, ha ka waaban inaad keydiso, ma jiri doono wax ku filan qof walba ...
Soo hel sanduuqyadeenna loogu talagalay VIP-yada ku saleysan gawaarida madow. Alaabooyin farshaxan oo tiro yar.
Waxaad jeceshahay inaad ka farxiso qoyskaaga, asxaabtaada adoo siinaya suxuun jilicsan. Waxaad jeceshahay inaad kor u qaaddo suxuuntaada leh alaabooyin gaar ah. Marka, si deg deg ah u soo saar badeecooyinkan cajiibka ah.
Intaas waxaa sii dheer, subagga loo yaqaan 'Truffle butter' wuxuu ka kooban yahay taraafikada dhabta ah ee madow oo sidoo kale loo yaqaan 'Tuber Mélanosporum'.
Takhasusleyaashu waxay jecel yihiin qashin-qubadan, waxay siinayaan dhadhan aan macquul ahayn oo ah hazelnut, misk iyo undergrowth. Waxay toosin doonaan burooyinkaaga dhadhankaaga. Subagga tayada leh wuxuu ka kooban yahay 3% xamuul madow iyo midab la'aan!
Ku raaxee fiidkii VIP: Sanduuqa aperitif, waxaan ku soo xulnay laba shey oo taxaddar weyn leh khubaradayada qashin-qubka, si ay u helaan tayada dhadhanka: subagga truffle.
Intaas waxaa sii dheer, waa inaad ogaataa in soosaarida gawaarida madow ( tuber melanosporum ) maahan saynis sax ah waxayna kuxirantahay sanadka soo noqoshada ay iskaga fogyihiin isla.
Sidaa darteed, badeecada inteeda badan waxaa lagu sameeyaa dhaamanka madow ee laga soo qaado gobolka Périgord (tuber melanosporum), laakiin waxay kuxirantahay sanadaha iyo tirada la goostay, waxaan si xoogan u xulannaa gawaarida madow ( tuber melanosporum ), oo ka timid gobol kale si ay u soosaaraan alaabtayada.